Toy ny "Amityville Horror amin'ny Crystal Meth" ny tranofiara tantara mahatsiravina amerikana
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Toy ny “Amityville Horror amin'ny Crystal Meth” ny tranofiara tantara mahatsiravina amerikana
Toy ny “Amityville Horror amin'ny Crystal Meth” ny tranofiara tantara mahatsiravina amerikana
by Trey Hilburn III Jolay 8, 2021
by Trey Hilburn III Jolay 8, 2021 2,930 hevitra
Taorian'ny teasers sy fanambarana an-taonina dia manana tranofiara lava tena izy izahay Tantaran'ny horohoro amerikana. Ny tsy ampoizina lehibe indrindra halainay dia ny fahazoanay tantara mahatsiravina krismasy miaraka amin'i Danny Trejo amin'ny maha fetin'ny Santa antsika.
AHS Nanolotra spookiness vitsivitsy haneso ny andiany spin-off AHS ho avy. Omaly, nizara ny vaovao izahay fa ny fihodinana dia hanomboka amin'ny fizarana maharitra 1 ora izay mitondra antsika hiverina any Murder House. Raha tsiahivina dia ny trano famonoana olona no fototry ny American Horohoro Story mandritra ny vanim-potoana voalohany.
Isaky ny vanim-potoana AHS nitranga tamin'ny lohahevitra niandohana hafa. Ny voalohany dia ny trano famonoana olona ny faharoa dia ny Asyum, ny fahatelo dia Freakshow, sns…
Tantaran'ny horohoro amerikana dia ahitana fizarana fito izay mitantara ny tantarany ao anatin'ny ora iray ora.
Araka ny efa nolazainay, Danny Trejo satria i Santa dia efa manana antsika an-tsambo miaraka amin'izany.
Tantaran'ny horohoro amerikana manomboka amin'ny 15 Jolay amin'ny FX ary Hulu miaraka amina premiere fizarana roa manokana. Aorian'izany dia tsy mila miandry ela isika AHS Vanim-potoana faha-10 amin'ny 25 Aogositra.
Mahaliana anao ve izany Tantaran'ny horohoro amerikana? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Scream dia nahavita famokarana tamin'ny fomba ofisialy. Nizara sary milay ny talen'ny fankalazana. Zahao eto.
Browse Cateories Select Category 4K UHD (4) Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (12) AppleTV + (6) Blu Rays (19) Horohoro amin'ny hatsikana (49) Tantara an-tsary (14) Zavatra tsara hividianana (21) Cool Stuff tokony hatao (5) Vaovao momba ny fialamboly (3) Facebook (andiany) (1) Angano (45) Rakitra hita (27) Gore (24) Haunts (3) HBO (sarimihetsika) (6) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (63) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,932) Sarimihetsika mahatsiravina (428) Horror Series (127) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (6) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (42) Resadresaka nifanaovana (andiany) (5) Horohoro LGBTQ (42) Lisitry (sarimihetsika) (40) Lisitry (andiany) (2) Tsena (21) Monster Horror (9) Sarimihetsika (2) Hevitra momba ny sarimihetsika (63) Sarimihetsika (15) Mozika (38) Netflix (sarimihetsika) (32) Netflix (andiany) (46) Tsy angano (5) Paranormal (76) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (53) Andiany (1) Famerenana andian-dahatsoratra (9) Shudder (sarimihetsika) (56) Shudder (andiany) (19) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (39) Sarimihetsika mivantana (106) Streaming Series (45) Kilalao (4) Tranofiara (lalao) (1) Tranofiara (sarimihetsika) (282) Tranofiara (andiany) (49) Lalao trailer (1) Heloka tena izy (49) TV Series (4) Lalao video (190) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (13)
Peacock dia mitondra any an-trano Halloween ho an'ny Peacoctober!
'Maty sy tsara tarehy' ho an'ny Premiere amin'ny Shudder amin'ny ...
Famerenana: Ny andiany Vestron Video Collector dia namoaka an'i Francis Ford ...
Ny tranofiara 'The Spore's' dia mamoaka apokalipsy feno ...
Septambra 22, 2021